Warshadda Sublimation Products | Shiinaha Sublimation Products-saareyaasha, Alaab-qeybiyeyaal
Xaji A3 / A4 / Roll Sublimation Warqad loogu talagalay Caleenta Dharka ee Mup / Dhar / Koob / Mouse Pad Print
Warqad Sublimation, kaas oo si gaar ah loogu talagalay daabacaadda gudbinta sublimation digital-xawaaraha sare-inkjet. Waxay ku habboon tahay daabacaadda xawaaraha sare ee inkjet-ka iyo ka dib daabacaadda, khadku si dhakhso leh ayuu u qallajiyaa, wuxuu yeelan karaa nolol dheer oo kayd ah ka dib daabacaadda oo ka kooban khadadka saxda ah iyo faahfaahinta daabacan, heerka wareejinta ayaa gaari kara 95%. Warqad aasaasi ah oo tayo sare leh iyo daahan leh isku mid ahaansho iyo jilicsanaan. Waa faa iidooyin waa Farsamo Fudud, daabacaad toos ah oo aan lahayn saxanka samaynta geedi socodka gaagaaban, badbaadi waqtiga iyo dadaalka; si deg deg ah u qalalan, iska caabin curling wanaagsan, daabac adigoon si wrinrin; daahan labis, soosaarida khad aad u fiican, cillad yar.
Pretreatment Liquid Sublimation Heat Transfer Coating with Sublimation Ink for T-shirt Cotton Fabs Mugs Glass Ceramic Birta Wood Daabacaadda
Dahaarka Sublimation waa Sublimation dahaarka leh suuf waxaa loogu talagalay daabacaadda dhijitaalka ah ee taageeraya isticmaalka badeecooyinka si gaar ah loo soo saaray, qalabka asaasiga ah ee la soo dhoofiyo alaab tayo sare leh si loo hubiyo raaxada dareenka cudbiga ka dib daabacaadda sublimation, midabka iyo midabka soonka, wareejinta ayaa si fiican u shaqeyneysa, qaab iyo jilicsan , waqti dheer oo aan libdin oo lagu gaari karo saameyn bannaan.
1000ML Dhalada Heat Wareejinta Sublimation Inks ee Epson / Mimaki / Roland / Mutoh Daabacaadda Daabacaadda
Sublimation ink waa biyo-milma oo laga sameeyay alaabta ceeriin iyo kuwa dabiiciga ah sida dhirta, ama qaar ka mid ah qalabka synthetic. Midabaynta, oo lagu qasan yahay biyaha, ayaa siiya midabada midabada.
Khadkeena sublimation-ka waxaa si weyn loogu adeegsadaa Epson iyo daabacadaha kale ee summada, sida Mimaki, Mutoh, Roland iwm. Fiilooyinka Sublimation-ka waxaa laga sameeyaa daahirnimo saa'id ah Tamarta kala firidhsan dheehyada. Sidaa darteed waxay bixiyaan waxqabadka daabacaadda-madaxa iyo nolosha biiyaha. Sidoo kale, kala duwanaanta khadadka sublimation-ka ugu fiican ayaa loo heli karaa in lagu isticmaalo noocyada kala duwan ee waraaqaha sublimation.
A3 A4 Waraaq Wareejin Cunto / Fudud oo loogu talagalay Daabacaadda Dharka Suufka Sublimation
Waraaqda gudbinta kuleylka funaanad madow iyo mid fudud oo 100% cudbi ah ayaa loo isticmaali karaa daabacadaha midabbada midabka caadiga ah, waxayna ku habboon tahay khadadka ku saleysan biyaha ee ku saleysan biyaha (Midabka midabka leh ee lagu taliyay). Kadib geedi socodka daabacaadda iyo wareejinta kuleylka, sawirada waxaa loo wareejin karaa dharka cudbiga, sidaas darteed waxaad soo saari kartaa badeecooyin kala duwan oo kala duwan sida funaanado Shaati ah, keli, shaati xayeysiis ah, dharka isboortiga. koofiyadaha koofiyadaha, barkimooyinka, barkimooyinka, suufka jiirka, masarrada, maaskaro faashad ah, qurxinta guriga. Qaabka loo wareejiyay alaabooyinka ayaa ah mid tayo sare leh, waxaana lagu gartaa midab, neefsasho, jilicsan oo xawli badan leh oo midabkiisu dhaqso u yahay dhaqidda.